Ivotoerana ADES FianarantsoaFianarantsoa
Nisokatra ny taona 2011 ny ivotoerana ADES ao Fianarantsoa. Ny taona 2013, no vita ny fananganana ny ivotoerana faharoa famokarana ireo fatana mitsitsy OLI.
Velaran-tany efa-joro mirefy eo amin’ny 4000 metatra toradroa(m2) eo ho eo, ahitana tranolehibe maromaro : trano fivarotana, birao, trano famokarana fatana sy efitrano malalaka fanambarana ireo fatana amin’ny farany. Trano famolavolana sy fanamainana ireo tanimanga, fatana roa lehibe fanamasahana ireo tanimanga ary efitrano fandokoana.
Fatana fanamasahana tanimanga niasa nanomboka ny lohataona 2016
Nanomboka ny farany taona 2015, nampiasa ny vongana fokana Artemisia izahay raha kitay no nampiasaina taloha handrahoana tanimanga hanamboarana ireo fatana mitsitsy. Nahitana fitsitsiana hazo mihoatra ny 200 taonina isan-taona izany.
Amin’izao fotoana izao dia manana fatana matanjaka fanamasahana tanimanga vaovao izahay, izay ahitana vokatra tanimanga tena tsara tokoa. Mahamasaka tanimanga 900 mahery indray miketrika io fatana io raha 600 tanimanga ihany zany teo aloha.
Ireo tanimanga ampidirina ao anaty fatanaMaherin’ny 35 eo ho eo ny isan’ny mpiasa mandrafitra ny ekipany ADES Fianarantsoa. Vehivavy no tomponandraikitra ny teknika eto Fianarantsoa.
Ekipan’ny ADES eto Fianarantsoa
Toerana ahitana azy Fianarantsoa